Ahoana no ahalalanao raha misy tsorakazo hifanaraka amin'ny bisikiletanao? - Hitaingina Bisikileta
Tena > Hitaingina Bisikileta > Manolo ny fork bisikileta - vahaolana azo ampiharina
Ahoana no ahalalanao raha misy tsorakazo hifanaraka amin'ny bisikiletanao?
nyny zavatra lehibe tokony ho tadiavinao dianyhaben'ny mpamily. Ny ankamaroan'ny headtube an'ny Mtb dia 1.1 / 8 ', vitsivitsy ny 1.5' nanycombo an'nynyroa, steered steera. Ka raha mbolany forkdia 1.1 / 8 'ianao tsara handeha. g.
Araka ny hitanao angamba eo akaikin'ny ankamaroan'ny bisikileta Neil amin'izao fotoana izao. Raha tsy misy fork, dia satria efa hanamboatra tapa-kazo mahafinaritra sy mamirapiratra eo amboniny isika. Amin'izany dia tiako ny manasongadina ny zava-misy fa maro ny lesoka mahazatra ataon'ny olona rehefa manangona forkara fampiatoana izy ireo, tena tsy te hanao an'izany izy ireo satria lafo tokoa, ka ireto misy lesoka 10 ataon'ny olona rehefa mametraka paingotra fampiatoana iray amin'ny bisikileta iray ianao, ary ny tena zava-dehibe dia izay tokony hatao hisorohana azy ireo. (feo bass lalina) Ny isa voalohany dia manapaka ny fantsom-pifamoivoizana ho lava ny halavany.
Ka raha mijery ny fork taloha an'i Neil ianao eto dia afaka mahita ny halavan'ny fantsom-pifamoivoizana ianao ary manolotra ilay vaovao, dia ho hitanao fa lava kokoa io. Izany dia satria tsy maintsy manapaka an'io amin'ny lava-lava aho. Tsy mila milaza amin'olona intsony aho izao, mila mandrefy izany indroa ianao ary manapaka indray mandeha.
Tsy te-hanadino an'io mihitsy ianao, hadisoana lafo be io, izao dia azoko atao mora foana ny mamatra izany amin'ny fantsom-pifamoivoizana, saingy tena miaro tena ianao dia te hanolotra ny bisikileta, mametraka ny fotony, manamboatra ny banga, manaova marika , izay tianao anaovana an'io fanapahana io dia zahao avy eo ary avy eo ataovy ilay fanapahana dia aza atao risika izany amin'ny alàlan'ny fanolorana azy fotsiny hanohitra izay efa anananao. Mora be ny manao fahadisoana. (Mozika indostrialy) - Tsy mamela toerana malalaka ho an'ny spacers-nao.
Fahadisoana mahazatra iray hafa ihany koa ny fametrahana ny fantsom-pifamoivoizana, mifanaraka amin'ny bisikileta izy io, tsara sy mametaka, saingy tsy misy fanitsiana anao. Ary koa, teboka iray azo antoka kely dia ny tokony hisian'ny fahazoana milimetatra 3 eo anelanelan'ny tampon'ny fantsom-pifamoivoizana sy ny atin'ny tampon'ny taho, ary ny anton'izany dia raha mifanindry ny zava-drehetra ianao mba hamoahana ireo bearings ireo dia mazava ho azy fa tsy maintsy mihetsika kely, noho izany dia tsy maintsy manana hadisoana kely eo izy. Ny mpanamboatra tsimok'aretina sasany sy ny mpanamboatra fork sasany dia izao no tena milaza fa mamela toerana malalaka ianao ary mihazakazaka spacer eo amboniny ary manana izany hadisoana diso izany ianao ao amin'ilay spacer mba hahafahan'ny fotony mifandray tanteraka amin'ilay fantsom-pifamoivoizana.
Mendrika hodinihina ary ny zavatra amporisihiko foana dia ny miala kely kokoa satria afaka manatsara ny dianao ianao. Ankehitriny dia manana spacer roa amin'ny bisikiletany i Neil talohan'izay, tena hampihena ny habeny aho ka io no hany tokana ary tadiaviny eo an-tampony hahafahany mahazo izany fifandraisana mahafinaritra izany. Ilay hazo dia manana haavo ambany kely miorina ambany izay midika hoe raha manana an'io milimetatra 3 eo ambanin'ny kodiarana eo ambonin'ilay taho ianao dia tsy manana ny tsorakazo rehetra avy amin'ny fantsom-pifamoivoizana) - Raha tsy hoe manana antsy maranitra tsara amin'ny hacksaw anao tena zava-dehibe tokoa izany hahazoana tombony madio sy madio.
Betsaka ny olona hitako tamin'ny lelam-paty hacksaw taloha no manapaka ny fantsom-pifamoivoizana ary tsy manapaka tsara. Tsy izany no tianao hatao. Ary mila mandinika ihany koa ny fomba hampiasanao ny hacksaw.
Tsy te hisintona ianao, tsy te-hisosa sy hisintona. Amin'ny ankapobeny, te hanao ny fanapahana amin'ny lalana iray ianao, manamaivana azy ary manapaka. Misy ihany koa safidy hafa azonao atao raha tsy mampiasa hacksaw ianao ary izany dia fanapahana fantsona.
Ankehitriny, ny mpanapaka fantsom-boaloboka dia tsara ampiasaina raha manana kalitao tsara izay natao hampiasaina amin'ny tsorakazo vita amin'ny anodisy mafy toa ity ianao. Ny tsy tianao hampiasaina dia fantsom-pianakaviana mahazatra izay tena ampiasaina amin'ny fantsona malefaka kokoa, toy izany toy ny fantsom-barahina ao amin'ny afovoan'ny hafanana. Rehefa misintona ny iray amin'ireto ianao dia manomboka manapaka ny fantsom-pifamoivoizanao amin'ny iray amin'izy ireo, dia azonao atao tsara ny mampirehitra ny faran'ny fantsona, noho izany ny fampidirana ilay fantsona steerer amin'ny lohanao dia lasa fanaintainana tokoa, ary toy izany koa ireo spacer-nao steerer ary ny tsorakazo dia mety hiafara amin'ny fifamatorana mafy rehefa mampiasa fantsom-by dia mampiasa kalitao tsara ihany, izay natao hampiasaina amin'ny metaly sarotra. (Mozika indostrialy upbeat) - Manaraka izany, tsy mila manapaka ny haavon'ny fantsom-pifamoivoizanao ianao na manamboatra fantsona izay somary mandeha amin'ny tehezan-tendrombohitra.
Tsy te hanao an'io ianao, tsy fanatanjahan-tena tsara io, mahatsiravina. Ary amin'ny tontolo mety indrindra dia te hampiasa zavatra izay torolàlana momba ny familiana natao ho an'io asa iray io ianao. Apetrakao ao anaty vise io ampahany io, mandalo eto ny fork, afehinao amin'ny toerany izy, ary manana torolàlana amin'ny antsipiriany tsara momba ny fanapahana ny fantsom-pifamoivoizanao ianao.
Na izany aza, fitaovana manokana ity raha tsy manao mihoatra ny in-droa ianao dia mety ho sarotra ny manamarina ny vidiny, noho izany dia manana hack kely mangatsiaka azonao ampiasaina ianao mba hahazoana vokatra mitovy amin'izany. Eto, makà hazo tranainy ho anao, mety misy iray amin'ny namanao iray, apetaho eo amin'ny fantsom-pifamoivoizana ny fotony, azonao atao ny mampiasa azy ho toy ny mpitari-dalana, manapaka ny fotony. Mazava ho azy, aza mampiasa ilay tianao hampiasaina satria azonao soratana sy fasika izy ireo, ary amin'ny ankapobeny dia tsara fitondranao azy ireo ianao, saingy ity zavatra taloha ity dia tsara ho an'izany. (mozika indostrialy upbeate) - Na inona na inona fomba safidianao hanapaka ny fantsom-pifamoivoizanao, raha vantany vao azonao io dia mila mametraka ny faran'ny fahatapahana ianao ary ny antony mahatonga anao hamela burr maranitra eo amin'ny sisiny.
A dia azonao tapahina ny tananao aminy ary ny B dia manasarotra ny fampifanarahana tsara ny siny ho headset. Ary amin'ny alàlan'ny efitrano fandoavan-ketra dia mametraka ny tahony sy ireo zavatra rehetra ireo. Ankehitriny dia te hanana rakitra vy maranitra mahafinaritra ianao aloha, noho izany dia te hanao hetsika milamina tsara ianao ary manome azy somary boribory kely ary aza adino ny manao ny ivelany sy ny ao anatiny.
Tandremo rehefa manamarina sao misy burrs satria mora be ny manapaka tsara ny rantsan-tànanao ary alao antoka fa tsara sy malama na aiza na aiza. Ankehitriny ny tena zava-dehibe eto ary ny zavatra tsy fetezan'ny kilasika amin'ny olona dia ny fandefasana vy ireo manerana ny fork, indrindra ar any akaikin'ny tombo-kase. Ankehitriny dia mety ho fanaintainana tokoa izy ireo noho ny habetsahan'ny diloilo sy ny fako manodidina azy ireo ary indraindray tsy ho tsikaritranao akory fa manana filina vy manodidina ny tombo-kasenareo ianareo mandra-pahatapitry ny ela fa tsy mandeha ny fork, teleskopika io, ary miasa fotony izy ireo, maloto, mazava ho azy, ary fantatrao izany raha ao anatiny izy ireo.
Ny fanoratana metaly dia hanimba be ny ao anaty ny forksinao, indrindra ireo kirihitra lafo vidy izay manampy azy ireo hidina sy hidina, ary amin'ny ankapobeny dia tsy dia tsara loatra ho an'ny bisikiletanao izany. Mitandrema ihany rehefa mametraka, aza avela hanakaiky ny zavatra ireo sokitra vy. Raha paranoida ianao, dia azonao atao ny mametraka harona plastika eo ambonin'ny kitanao rehefa manapaka io ianao, mba hahazoana antoka fa tsy misy loto. (mozika indostrialy upbeat) - Manaraka, tsy hipetraka tsara ny kintanao.
Ity dia mahazatra, mitranga foana izany, mety hanome anarana olona vitsivitsy ato amin'ity trano ity aza aho izay miasa ao amin'ny GMBN ary manao an'io tsy mety io matetika. Tsy mijery anao Blake aho, fa angamba izaho. Ka ny kintana, misy fomba roa samy hafa ahafahanao diso.
Ny voalohany dia ny tsy fanananao fitaovana fametrahana marina ary mazava ho azy fa fitaovana fametrahana hametraka izany ao anaty bisikileta dia fitaovana lafo vidy sy tena manokana hiaraha-miasa. Io no fitaovana tsara indrindra ary ary io no hany fomba ahafahana manamboatra azy tsara, saingy misy fomba hafa ahafahanao manao azy. Ohatra iray ny fakana ara-bakiteny ny bolt izay ampiasainao miaraka amin'ny voan-kintan'ny bisikileta ary hametahana azy ao anaty bisikileta.
Mitandrema amin'izany. Voalohany, tena mora ny manadiso ary mametraka azy amin'ny zoro. Raha vantany vao manomboka amin'ny zoro io dia sarotra be ny manitsy azy, ary tsy hahazo fitongilanana mihintsy ianao eo amin'ny headset amin'ny fotoana hametahanao azy amin'ny lalina loatra.
Tsy ho tonga amin'io zavatra io mihitsy ianao ary ny fomba tokana ahafahanao mamoaka voanjo kintana dia ny manadino azy hatrany amin'ny fantsom-pifamoivoizana ary amin'ny faran'ny andro dia vaky izy ary avy eo tsy tsara. Ka, ireo dia kilalao roa. Ny iray hafa dia raha totoinao io dia afaka misaraka izy ireo.
Ka ny voanjo kintana dia misy ampahany telo, ny takelaka asterisk roa ary mazava ho azy ny faritra misy kofehy mitazona azy ireo. Azonao atao ny manala azy ireo ao anaty fantsom-pifamoivoizana ary tsy ho afaka hahazo preload mihitsy ianao. Ho tafiditra fotsiny ianao amin'ny zavatra mikotrika ao anatiny.
Ka andramo ary ialao izany amin'ny sarany rehetra. (Mozika indostrialy miakatra) - Aza mampiasa tavy. Araka ny efa nolazaintsika matetika momba ny bisikileta, dia misy faritra sy singa mihetsiketsika be dia be mila fanosorana.
Mety tsy mbola nasianao tavy velively ny taha-ketranao. Fa maninona ianao no tokony ho It is a kind of fit-and-forget satria ny zava-misy dia miafina amin'ny bisikileta, tsy toy ny zavatra mekanika izay hitanao, toy ny boaty fanamoriana. Ka rehefa manana ny fork amin'ny bisikileta ianao dia hevitra tsara ny hamoahana ny bearings, zahao izy ireo, alao antoka fa mbola mahatsapa izy ireo fa tsara, mamafa azy ireo, ho azo antoka fa madio tsara izy ireo. Toy izany koa ireo kaopy. ny ao anatiny ao anaty boaty ary asiana tavy vaovao ao aminy.Maro ny olona fantatro fa tsy matavy amin'ny moto ary miziriziry hanohy mitaingina azy ireo dia hamono ireo bearings ireo haingana be.
Mampiasà tavy betsaka dia hanatsara ny zava-drehetra izany. (mozika indostrialy funky) - Ary ny farany amin'ilay lisitra dia ny tsipika fitantanana sy ny fampifanarahana tsongan-kazo. Nanao daholo izahay rehetra ary nipetraka tamin'ny bisikiletan'ny namana iray izahay ary nahita fa malemy paika ny setriny.
Sarotra be ny mametraka azy ireo tsara indrindra, saingy misy toro-hevitra sy tetika kely vitsivitsy azonao atao mba hahamora kokoa azy io satria mety, fantatrao fa sarotra be ny mampiasa ny maso, hahalavorary izany. Ankehitriny ny ankamaroan'ny olona dia manandrana mampifanaraka ilay tsorakazo amin'ny kodiarana eo alohan'io, mora be taloha raha nanana taho lava tsara ianao, taho lava tokoa raha ny marina, saingy amin'izao andro izao raha manana taho fohy isika dia sarotra be, tena tokony hatao tsara. Ka ny tendrony tsara lavitra kokoa dia ny milahatra amin'ny kiran-tànana miaraka amin'ny clamp fork satria azonao jerena mivantana ny fifandraisan'ny tohatra, akaiky kokoa azy ireo izany.
Ny tendro farany azonao atao, na izany aza, ity dia mitondra zavatra hafainganina haingana, esory ny fanaraha-maso eo amin'ny kitaponao, ka esory ny fihazonana na mety esorinao tsy ho eny an-dàlana fotsiny ny fantson-drivotrao, atsofohy amin'ny rindrina ny tongotrao. ary ny kitapom-batsy manoloana ny rindrina, ary azonao atao tokoa ny mampiasa an'io rindrina fisaka io, raha toa ny rindrina ampiasaina dia fisaka tanteraka mba hahazoana antoka fa milahatra ny tananao sy ny fork anao. Fehezo ny zava-drehetra ary avy eo rehefa averinao ao aminao ny bisikiletanao. Ho hitako fa zana-tsipika maty sy mahitsy.
Aza mety ho anisan'ireo izay mitaingina fotodrafitr'ala. (Mozika indostrialy) - Atsofohy ny hazakazaka taribinao. Betsaka no mety tsy mandeha eto izao.
Mazava ho azy fa mila lalana madio tsara ianao handehanan'ny frein aloha mankany amin'ny fork. Ny tianao hatao dia alao antoka fa tsy mihazakazaka ny tariby na tsy mihazakazaka ivelan'ny tongotra fork ny fantsana. Ny antony voalohany dia satria mety hanosotra ny sainao ianao ary hikosoka ny loko.
Ny antony faharoa dia satria mora mora tratra izy, mihodinkodina mba hahatsapa ny underbrush, ary raha sendra lozam-pifamoivoizana ianao dia mora be ny manimba ny fantson-tsongo eo aloha. Te hitarika avy ao anaty ny fork ianao eto, ao anaty ny tongotra, ary eto amin'ny lalantsara, miaraka amina mpitazona tariby omena. Io izao no mahatonga ny hadisoana kilasika maro.
Ahodinanan'ny olona ireny visy ireny ary esoriny foana ireo kofehy ireo, visy marefo tena marefo io, mitazona ny tariby fotsiny amin'ny toerany. Tsy tena mametaka azy ireo amin'ny hery rehetra izy ireo, alao antoka fa tsy ho very saina miaraka amin'ny tsy refesi-mandidy ianao. Aza manantona ity na manimba azy. (Mozika tetezamita Jazz) - Aza mampiasa paompy manaitra mba hahazoana ny tsindry rivotra mety ao anaty fork anao.
Fantatro ny alaim-panahy, fantatro ny olona manao an'io matetika, tsy mety ny mampiasa paompy fiaran-dalamby hampiakatra ny fork. Noho izany ny forks dia mihazakazaka amin'ny tsindry ambany kely ary miresaka hatramin'ny 100 PSI, tsy dia be loatra izy io ary zavatra azo tanterahina amin'ny paompy iray, saingy azo antoka fa tsy te hampiasa paompy misy karazana adaptatera amin'ny fork ianao. Ny anton'izany dia satria mampiakatra rivotra be dia be haingana be izy.
Mora be ny manimba ny tombo-kasenanao. Mora manimba ny valizy eo an-tampon'ny fork. Paompy manaitra fotsiny no ampiasao.
Izany no nanamboarana azy, ho an'ny fikorontanana sy ny fork, ary tsara tarehy sy marina izy ireo, ary tsy hanimba ny fork anao mihantona. Eny, misy fahadisoana mahazatra folo ataon'ny olona rehefa mametraka forks fampiatoana amin'ny bisikiletany. Aza olona manao fahadisoana folo.
Ataovy tsara. Ataovy tsara. Ary afaka mankafy fork fampiatoana amin'ny bisikiletanao ianao.
Raha mila lahatsoratra hadisoana hafa dia tsindrio eto raha misy lesoka amin'ny bisikiletanao. Ny karazan-javatra tianao rehetra atao rehefa avelanao any an-trano ny kodiaranao eo an-tokatrano ary voadona ny valin-dronono raha tsy ampiasanao ilay lever ao ambadiky ny fiara rehefa tsy manana kodiarana eo anoloana ianao. Ary kitiho eto raha tianao hianatra ny fomba hametrahana ny fampiatoana anao ao anatin'ny folo minitra.
Mora ny manao lahatsoratra, afaka manao an'io ny olona rehetra, ary azonao atao izany na aiza na aiza. Araka ny mahazatra dia omeo zoro izahay raha tianao ilay lahatsoratra, ampahafantaro anay ny hevitrao amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany ary mazava ho azy fa aza adino ny manindry ny lakolosy fampandrenesana izay hampandre anao isaky ny mamoaka lahatsoratra vaovao izahay.
Azonao soloina ny forkety bisikileta?
fanoloananyfork afakany anaobisikiletafampisehoana, ary ny fividianana no ampahany mora. Ny tena olana dia mitoetraahoana noesory aryhanoloanany talohairay. Ity ambany ity dia torolàlana iray isaky ny dingana manampyianareoamin'ny alàlan'ity dingana ity.
Ny fametrahana fork vaovao amin'ny bisikiletanao dia fampivoarana mahafinaritra ary afaka manatsara ny fikirakirana. Raha ny marina dia dingana mahitsy iray izay azonao atao ny manao ny tenanao ao an-trano. Ka hasehoko azy io amin'ny alàlan'ny fampidirana fork RockShox vaovao amin'ny Scout Nukeproof ahy.
Tena mora, ity no fomba. (boom mampientam-po) Toy ny asa rehetra miasa amin'ny bisikiletanao dia mila karazana fitaovana ianao hanaovana azy. Raha any amin'ny fivarotana bisikileta ianao dia misy fitaovana manokana manam-pahaizana manokana toa an'io Crown Race Puller io izay tena ilainao hamitana ilay asa amin'ny bisikileta, fa aza matahotra fa maro ny safidy hafa.
Ary na dia ny fitaovana mety aza no fitaovana tsara indrindra ho an'ny asa dia azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fitaovana tsotra be - mila karazana hex wrench ianao mba hanesorana ilay fork amin'izao fotoana izao amin'ny bisikiletanao. Mila milina hacksaw na fanapahana fantsona ianao, fomba iray hanapahana ilay fantsom-pifamoivoizana, ary mila rakitra ianao. Mazava ho azy, ny fantsom-pandrefesana manan-danja mba hahafahanao manapaka ny fantsom-pifamoivoizanao amin'ny halavany.
Ka izao no fanaovanao azy. (Mihodina kodiarana) Noho izany dia mila esorinao aloha ny tadinao efa eo amin'ny bisikiletanao. Ny fametrahana ny bisikiletanao amin'ny sehatry ny asa dia mazava ho azy fa ny fomba mora indrindra sy tsara indrindra anaovana izany amin'ny alàlan'ny toeram-piasana, avy eo dia mila olona manampy anao amin'izany asa izany ianao amin'ny fihazonana ny faran'ny bisikileta.
Ka mazava ho azy fa tsy maintsy esorinao aloha ny kodiarana satria hanakana ny zavatra fotsiny izany. Raiso any ny axle-nao na ny famotsorana haingana ilay bisikileta. Atsipazo any aoriana ny bisikileta fandanjalanjanao.
Tsy mila izany ianao mandra-pahatapitry ny asa. Manaraka izany, ho azonao antoka ny fanesoranao ny caliper tenany sy ny fitantanana tariby amin'ny fork misy anao, ary avelao fotsiny hilona izany. Mazava ho azy, tianao ho azo antoka fa tsy tafiditra ao izany.
Manaraka izany, mila mamaha tsotra izao ilay fitarihana tariby tena izy eo amin'ny tsoraka ianao mandra-pivoakany avy eo amin'ilay fork any, ary esorinao tsotra izao, tsy ho very ilay bolt kely ianao. Ka noho izany dia haveriko amin'ny tsorakazo tokoa izany, ka tsy mandroso amin'ilay fotony aho izao. Hosokafanao ny kofehin-kibonao, fa aza esorina ny satrony ambony satria raha esorinao io fotoana io dia mety hilentika amin'ny tany ny fork ary ho very ny gubbins-nao rehetra.
Ka vahao fotsiny ny visy fametahana clamping amin'ny lafiny roa eo. Ity iray manokana ity dia visy efatra milimetatra Allen, saingy matetika dia dimy ary indraindray enina aza. Marina, ka vonona ianao hivoaka izao.
Izao no teboka tokony hotadiavina. Ka izao dia hosokafako moramora io satroka ambony io raha mitazona ny fork aho ka tsy misy alehany. Hesoriko fotsiny ny satroka ambony.
Mariho fa ny fantsom-pifamoivoizana dia manodidina ny efatra milimetatra eo ambanin'ny tampon'ilay fotony eto. Tsy maintsy tadidinao izany amin'ny dingana manaraka. Alefaso eo amin'ilay fantsom-pifamoivoizana ilay fotony.
Navelako hanantona fotsiny izany. Ka raisiko ireo spacer-nao izay efa teo ambanin'ilay fotony. Hesoriko izy ireo amin'ny sisiny miaraka amin'ny satroka ambony eo akaikiny.
Ankehitriny ny zavatra manaraka dia ilay takelaka lohan'ilay lohahevitra tianao hiposaka. Ka io no satrokao ambony indrindra any. Avy eo manana banga eo ambaniny sy ny peratra famatrarana ianao, izay peratra misaraka izay misosa mankany amin'ny headset eo.
Ka alao antoka fa mijanona ao koa izy. Avy eo ianao manana mpanasa lamba sy ny peratra fitondra ambony. Navelako hivoaka avy tao amin'ilay lohan-doha fotsiny ilay fork.
Indraindray ianao dia mety mahita fa ny fiakarana ambany dia mijanona ao amin'ny lohan-doha. Raha izany dia apetraho eo ambaniny fotsiny ny tananao mba tsy hianjera amin'ny tany izy ary ho maloto. Amin'ity tranga manokana ity dia mivoaka amin'ny fantsom-pifamoivoizana tena izy.
Mba hampisehoana aminao fotsiny fa ity no peratra ambany. Avy eo dia misy spacer kely na tombo-kase, ary avy eo ny peratra satro-boninahitra tena izy dia mbola ampahany amin'ilay saosy. Tokony hataontsika izao ary esorintsika, fa alohan'ny hanaovantsika izany dia hadio kely daholo isika.
Na dia lavitra ny bisikileta aza ny fork, araraoty fotsiny ity fotoana ity hijerena ny frame, alao antoka fa milamina ny zava-drehetra, tsy misy marokoroko, tsy misy simba na zavatra hafa toa izany. Ka jereo fotsiny ny fork vaovao sy ny fork taloha ary jereo ny tsy fitovizany. Ka ilay voalohany dia ho hitanao fa ny fantsom-pandihizana amin'ity fork vaovao ity dia lava lavitra noho ilay taloha.
Ka tokony hamboarintsika araka ny tokony ho izy ny halavany, noho izany mila esorinao ilay fork taloha. Misy fotoana roa lehibe indrindra amin'ny hazakazaka satro-boninahitra. Misy ireo manohy manosika ary avy eo misy ireo manana peratra misaraka.
Ity iray manokana ity dia manana peratra misaraka izay midika fa mora kokoa ny misintona ary tsy mila fitaovana manokana hanaovana izany ianao. Mariho koa izao fa amin'ny tadin'ny bisikileta an-tendrombohitra dia matetika no hitanao eto ity fialan-tsasatra kely ity. Tena mora ampiasaina amin'ny fidirana amin'ny trano efa antitra sy mendri-piderana, biriky mpanendrikendrika na totohondry mba hamaha ny hazakazanao satro-boninahitra ary haka ny fomba mety amin'izany, fa io no iray izay nampiasako nandritra ny taona maro, ary raha mbola ianao Azonao atao ny maka ny fotoananao sy mampiasa birao fanodinam-potoana taloha, tsy mila mampiasa biriky vaovao tsara intsony ianao satria te hihazona azy maranitra. Noho ny antony mazava dia ekena tanteraka ny fanesorana an'io.
Na izany aza, amin'ny fork sasany dia lazainay fa manana fork tsara tarehy misy satroboninahitra karbaona ianao na fork tena maivana dia tsy te hipetraka eo ianao, ka fitaovana iray tena manokana ho an'ilay asa izy io. Fantatro izao fa ny ankamaroanareo dia tsy hanana fidirana amin'ny fitaovana iray, fa te hampiseho izany anao fotsiny aho ary mampiseho aminao ny antony maha-zava-dehibe izany fitaovana izany. Ity no Park Adjustable Crown Race Puller.
Ka io dia nivadika ambony ambany tamin'ny toeran'ny asa, ary eto ianao manana ireto lelany telo ireto. Ny hevitrao dia ny mampiraikitra ny fantsom-pifamoivoizanao ary apetaho eo ambaniny ireo lelany mba hiarovana ny hazakazaka satroboninahitra tena izy, ary avy eo dia ahodinanao ny diety mba hanesorana ny vatom-pifidianana satroboninahitra fa somary fanitarana ho an'ny asa toa an'io, fa raha ny tena izy raha mieritreritra ianao fa eo amin'ny bisikilety eny an-dalana ohatra dia manana hazavana faran'izay maivana sy tena marefo ianao amin'ny vatan-tsoratry ny fibre karbonika toy izany ary izany no zavatra farany tadiavinao fa izany no fomba tsara indrindra ary tena mahay mamoaka izy ireo ny hazakazaka satro-boninahitra. Fa mazava ho azy, fantatro tsara fa tsy hanana azy ny ankamaroan'ny olona, ​​tiako hampahafantatra anao fa misy izy ireo.
Ka raha manana olana amin'ny fametahana iray amin'ny bisikiletanao ianao dia azonao atao foana ny mitondra ny forkanao any amin'ny fivarotana bisikileta eo an-toerana ary mety misy fonosana mofomamy iray, ary antenaiko fa misy mekanika manana ny iray amin'ireny ary hanampy anao hanala ny hazakazaka satro-boninahitra. (Mihodina kodiarana) Noho izany, manao fifandimbiasan-tsolika mitovy amin'izany aho eto, ka horefesiko amin'ny fantsom-pitaovana azo antoka ny fantsom-pifamoivoizana. Hamarino tsara fa rehefa mampiasa refy fandrefesana ianao dia mihevitra ny kely amin'ny farany izay mety hiakatra hatramin'ny roa na telo ee milimetatra.
Hamarino tsara fa misosa miaraka amin'ny satro-boninahitr'i fork izy io. Noho izany, amin'ny milimetatra eto, koa inona aho, iray, fito, efatra, 174, ka izany no refy ilaiko hanaovana ny marika tapaka eo amin'ilay fork vaovao. Andao ary hojerentsika eo ny fepetra.
Andao horefesintsika eo amin'ny fork vaovao, ary avy eo manana screwdriver ho an'ny lohako tsara eto aho hanamboarana kely ho fanovozan-kevitra. Ankehitriny ity dia zavatra alohan'ny hanapahanao, tsy azoko atao ny manantitrantitra, mandrefy indroa, manapaka indray mandeha, tsy te-hanakorontana ity ianao ary hanapaka fohy, efa hitako imbetsaka ity ary zavatra lafo be ny mahazo manodidina satria ianao Manolo ny fantsom-pifamoivoizanao dia midika hoe manolo ny fork, dia midika koa izany fa manolo ny satro-boninahitra sy ny tongotra ambony, ary mazava ho azy fa midika serivisy feno fork ary koa ny vidin'io singa io. Ka alao antoka fa nandrefy ianao alohan'ny nanapahana, nanamarina, nandrefy indray ianao, nanamarina indray ianao.
Matetika ny tsara kokoa, ny milaza ny marina. (Mihodina kodiarana) izao raha tsy tianao i Li. Tsy manaparitaka ny forkinao ianao, ary tena te hanova ny vodi-alohan'ilay bisikiletao, angamba amin'ny alàlan'ny fananganana lava kokoa ny fantsom-pifamoivoizana ary ahazoana alalana bebe kokoa.
Ny fomba tsara indrindra hanaovana izany dia ny fametrahana ny fork amin'ny bisikileta. Ka apetraho ilay hazakaza-kavoana, amboary, apetraho ao ilay vatan-kazo, apetraho amin'ny toerana tianao, avy eo manaova marika eo ambonin'ilay fotony. Avy eo amin'io marika io dia mila mandinika telo ka hatramin'ny efatra milimetatra ianao eto ambany izay hametrahanao ny marika tapakao.
Ary ny antony? Satria rehefa mamatotra azy amin'ny satrok'ilay preload stem eo an-tampony ianao dia misy toerana malalaka ahafahana mamoaka ny zava-drehetra miaraka hametaka tsara ny fiterahana. Raha flush fit, dia tsy afaka manenjana na manitsy ny bearings mihitsy ianao mba tsy hisy lalao. Ary mazava ho azy, raha mitaingina headset malalaka ianao, rehefa afaka kelikely dia hanimba ny bearings ianao ary mety hanimba ny endrinao ihany koa.
Ankehitriny, raha ny tena fanapahana ny fantsom-pifamoivoizana dia misy vitsivitsy ihany ny safidy hafa azonao atao. Ankehitriny ny klasik na ny fomba taloha tsara dia ampiasao hacksaw. Hamarino tsara fa manana lelam-bolo vaovao mahafinaritra ianao ary voadidy tsara izany mba tsy ho tampoka na handrora.
Ka ity dia fomba tsara sy mivaingana. Raha mampiasa hacksaw ianao dia ataovy izany, tena mila rakitra vy ianao avy eo aorian'izay hahazoana antoka fa tsy misy burrs, tsara sy milamina na anatiny na ivelany. Mba hitazomana ny volo, dia misy safidy vitsivitsy ho anao.
Ankehitriny ianao dia afaka mampiasa torolàlana manokana amin'ny fanapahana fantsom-pifamoivoizana toa an'ity, ary miasa amin'ny fomba tena tsara izy io dia voafatotra anaty vise, ary amin'ny ankapobeny dia apetakao eto ilay fantsom-boaloboka ary apetaho amin'ny lavaka ny marika notapahinao. mora, aorian'io Maso io. Hamafisinao avy eo io clamp io ary apetraho eo ny marika notapahinao. Fomba tsy misy hadalana io.
Io no fomba ofisialy hanafoanana ny fantsom-pifamoivoizana ary tsy hahadiso ny marika eto, dia miala ny sombin-javatra, ity no sotasota tazominao, asa vita fa tsy afaka miditra amin'ireo fitaovana ireo aho ary mazava ho azy fa fitaovana ity ho an'ny atrikasa bisikileta. Tena tsara ireo. Oloko manokana io.
Notapahiko be dia be ny forf fork nandritra ny taona maro, saingy tsy afaka nanao an'io im-betsaka fotsiny ianao. Angamba tsy azonao atao ny manamarina ny iray amin'ireto. Manoro hevitra anao aho noho izany mba hitazona tahon-kazo taloha.
Azonao atao izao ny mampiasa ny taho tahirinao taloha ho toy ny mpitari-dàlana amin'ny fomba mitovy aminy, atsipazo ity amin'ny fantsom-pitarihanao ary ny multitool anao dia afaka manamafy azy tsara amin'ny toerana mifandraika. Ary avy eo eo ny marika notapahiko. Ataovy eo ny marika fanapahana, manome tari-dalana tsara izy satria fotony efa taloha, tsy dia faly loatra aho raha simbaina intsony, fa tsara ny fampiasana vokatra taloha.
Ankehitriny ny safidy farany dia anao, ary io dia safidy tena mora azo rehefa tsy manana haitraitra ianao, raha manana toeram-piasana hiasa amin'ny bisikiletanao ianao dia manana iray amin'ireo tovolahy kely ireo. Mpanapaka fantsona ity. Raha tsorina, ny fantsom-pifamoivoizanao rehefa miditra eto ianao dia amboary ny mpanasa lamba mandra-pikitika azy io ary atodiho manodidina mandra-pahatapinao ny fantsom-pifamoivoizana amin'ilay teboka voalaza.
Mahazo fahatapahana tena marina izy io. Tsy izy ireo no ampahany mora indrindra amin'ny kit, fa tena mora ampiasaina izy ireo, ary toy ny nolazaiko hoe, raha tsy manam-paharoa ianao manana toerana hiasana amin'ny bisikiletanao dia mety tsara kokoa noho ny antontam-bato, a vise, iray Okay, noho izany, ny fomba marina hanaovana an'io dia ny fampiasana vise, ny fampiasana ny tsofa, ary ny fampiasana ny hacksaw. Afaka manamboatra marika hacksaw ianao izao, mampiasa karazana toro-lalana, manamboatra, angamba miankina amin'ny faritra malefaka.
Tsy hanimba azy ianao, fa tsy hikapoka anao raha hanao hetsika marina sy marina. Ka ampifanaraho fotsiny amin'izay ny vice. Mazava ho azy, mazava ho azy, ity vise ity dia tsy napetraka eo amboniny, fa napetraka amin'ny vatan-kazo mavesatra tokoa izy io, ary mihoatra noho ny ampy noho io antony io io.
Noho izany dia zava-dehibe ny ahazoanao antoka fa nahazo zavatra hafa tsy nahy ianao toa ny fanosihosena ny fantsom-pifamoivoizana, fa tsy nahitanao azy ireo tsy nahy. Ity no fotoananao mandrefy indroa, mamy indray mandeha. Tsy afaka manantitrantitra izany ampy.
Ka io no andalana. Izaho aza nanao zana-tsipìka kely niaraka taminy ka fantatro fa ilay tiako hotapahiko. Ka apetrako ao fotsiny ary avy eo, amin'ny fahatsapana fitoviana, apetraho eto izany, ary avy eo dia ho tsara apetrakao ny marika fanapahako.
Izao no fotoan'ny fahamarinana. Raha diso aho, dia tsy hifanaraka amin'ny bisikiletako izany ary azoko antoka fa mety ho hitanao tsara izany, saingy tsy tiako hitranga izany. Hamarino tsara fa hitandrina ny zava-drehetra ho tsara sy mafy orina ary tsara ianao ary hikapoka tsara amin'ny hacksaw. (Sawing) Mandehana hatrany, tohizo mandra-pahatongan'ny fotoananao.
Ary eto no ahitanao tombony maranitra tsara. (Haingam-pandeha) haingam-pandeha avoavo) Tapaka eo izany, fa raha mbola manana ny lefitra eto aho, atosiho kely fotsiny.
Hanadio izahay fa mitandrema ihany fa mety ho toy ny hoe misy tendrontany maranitra be aho manodidina ny sisiny. Haka ny rakitra vy ianao ary ny malama fotsiny no tadiavinao. (Fametrahana vy) Ankehitriny ianao dia te hampiasa fotsiny ny sisin'ny boribory ataonao ary hanao zavatra mitovy ao anaty ao amin'ny fantsom-pifamoivoizana satria tsy maintsy milamina izy io mba hahafahan'ny kofehinao kofehy vita amin'ny kofehy preload.
Zavatra iray tena zava-dehibe tokony hotadidina rehefa manapaka ny fantsom-pifamoivoizana ianao dia mahazo an'ity metaly rehetra ity, toy ny fametrahana vy, rakitra vy, vovoka vy na aiza na aiza. Tsy mila an'io eo akaikin'ny faritra mekanika amin'ny bisikiletanao ianao indrindra ny bearings izay hitsoka ity zavatra ity amin'ny tany ianao, alao antoka fa hamafa izany ianao ary hamoaka azy eo. Tsy tianao eo akaikin'ny faritra mihetsika izay mety hanelingelenany izany zavatra izany. (Mihodina kodiarana) Eny ary, rey olona? Voakapa ny fantsom-pifamoivoizana ankehitriny, manaraka ny clevis mila averina ao amin'ny e. Ankehitriny, araka ny fantatrao teo aloha, ity iray ity dia manana hazakazaka mizara izay midika fa manana haitraitra aho amin'ny fanindriana ara-bakiteny an'io sy amin'ny toerana voatosika.
Tsy mila fipetrahana. Na izany aza, raha mila toerana ianao dia misy safidy roa azo omena anao. Ankehitriny, ny kinovan'ny teti-bola dia ny mampiasa punch hole na screwdriver hametahana azy.
Fa tsy tena te-hanao an'izany ianao raha tsy hoe fantatrao tsara izay ataonao satria mety hanimba ireo velaran-tany ipetrahan'ny bearings ianao. Tsy mipetraka flush. Midika izany fa mahazo teboka tery ianao ao amin'ny headset, mazava ho azy fa mihasatra ny mitondra azy, tsy scenario tsara izany.
Ankehitriny ny fomba marina dia ny fampiasana fitaovana fanitsiana peratra satro-boninahitra. fantsona mafy sy mafy. Mahazo tsofoka firaka samihafa.
Hipetraka eo ambonin'ilay hazakazaka tena izy ianao ary hofidinao amin'ilay mipetraka tsara indrindra eo, apetaho eo amin'ny toerany ilay izy, avy eo nokapohinao tamin'ny maletto izay mahitsy tsara. Ary mazava ho azy fa tsy mila manao izany aho amin'ity tranga ity. (Wheel spin ning) Ka saika vonona hamerina ny tadinao ao anaty bisikiletanao ianao, fa ny zavatra farany ilainao dia ny mametraka ny iray amin'ireo tovolahy kely ireo.
Ka ity dia voanjo miendrika kintana izay mipetraka ao anatin'io fantsona mpamily io ary misy kofehy ao anatiny ao anaty bolt M5. Ary ny antony dia ny vodi-tampon-dohan'akanjonao ambony dia miaraka amin'ilay visy ary izy ireo dia manintona ny zava-drehetra ka mifanaraka tsara sy ihomehezana miaraka amin'ny bearings ny zava-drehetra ka tazonina tsara ny bearings, voapetraka mialoha izy ireo, tsy misy mihetsika, mandeha tsara daholo ny zava-drehetra. Ka io dia tsy maintsy mankany amin'ny lalina efa voalahatra.
Ankehitriny dia tena misy fomba roa azonao atao momba an'io. Misy ny fomba teti-bola hampiasana bolt M5, tolory ny fampiasana ilay tena ampiasainao amin'ny bisikiletanao, ampiasao fitaovana fanoloana, ary azonao antoka fa mikapoka azy io ianao. Ankehitriny azonao atao izany, saingy tsy misy antoka A hahazo izany halaliny marina na B, hahitanao azy mahitsy.
Izany hoe, raha mahazo aina ianao amin'ny fampiasana tsenambarotra iray monja, raha tsy mampiasa fitaovana mety ianao dia azonao atao izany. Na izany aza, misy fitaovana manokana hametrahana izany amin'ny tena halaliny. Misy safidy roa azo atao.
Ka ity no fitaovana taloha kokoa dia toy ity. Ahodinkodinao ara-bakiteny ny voanjo miendrika kintana, ampifanaraho amin'ny tsoratadro izany ary ataovy amin'ny tantanana. Ny safidy hafa dia iray amin'ireo kinova somary mandroso kokoa amin'ilay zavatra mitovy.
Ahodinao ny voanjo ary ampifanaraho amin'ny fantsom-pifamoivoizana. Atsofohy izy ary apetraho mody, ary io no halaliny farany hametrahana azy. Eny, ankehitriny miaraka amin'ny voanjo miendrika kintana natsofoka tao amin'ny fantsom-pifamoivoizana sy ny peratra satro-boninahitra tao, mahay mametraka ny bisikileta indray aho .
Ankehitriny, na dia tsy mila manana menaka ao anatiny aza ianao, dia arotsaho fotsiny ny bearings toy izany, tena sakana tsara amin'ny fidiran'ny rano izany. Ka manoro hevitra aho ny hametaka menaka ny peratra satro-boninahitra tena izy, ary avy eo manodidina ny kaopy ao anatiny ao anaty vatan-kazo eto, eo amin'izay ipetrahan'ny fiterahana. Noho izany, ny peratra hazakazaka gasket sy ambany izao, apetraho eto izy ireo.
Avy eo alao antoka fa mifantoka tsara ireo tariby, apetraho fotsiny ao anaty lohan-doha ny fantsom-boaloboka, ahodiho ary tadiavo ao ambany ilay lohateny, avy eo avereno amin'ny lozabe toy ny teo aloha ihany ny lohateny. Ka miverina amin'ny toerany aloha ity fiatraikany ity, hametraka menaka somary betsaka kokoa fotsiny aho eo amboniny mba hiasa ho toy ny sakana tsy tantera-drano ary avy eo alao antoka fa madio tsara eo ny fantsom-pamilianao ary afaka mandeha miaraka amin'izany ianao. ireo faritra hafa amin'ny headset. Toy izany no mivezivezy ao ny peratra faneriterena misaraka.
Tokony ho azonao antoka fa ny fantsom-pifamoivoizana dia azo sintonina tsara ary maneso an'ireo bearings ireo. Ary manana ny tombo-kase mipetraka eo ianao. Hamarino tsara fa voafafa izy io.
Mipetraka tsara eo ny tombo-kase. Satria mitohy ny satroka ambony amin'ny headset. Avy eo dia eo ny spacer misy ahy, ary avy eo dia misy tranga iray izay mandeha amin'ny làlana rehetra. Ankehitriny manana ny banga kely mahafinaritra any aho.
Tsy maintsy apetrako fotsiny ilay satrok'ilay taho ary avy eo hosokafako. Tsy hitongilana loatra amin'izy ireo aho izao, te-hahazo antoka aho fa efa milamina ny zava-drehetra. Alao antoka fotsiny fa tsara ny zavatra rehetra.
Fotoana izao hamerenana ny frein eo amin'ny Mount the fork amin'ny bisikileta. Ny zavatra farany tokony hatao alohan'ny hanaovana fanaraha-maso ny fiarovana dia ny hahazoana antoka fa voakarakara tsara ny fitondra anao. Noho izany miaraka amin'ny visy fametahana tsorakazo mitazona ny fotony amin'ny fantsom-pifamoivoizana miaraka amin'ireo malalaka ireo mba hahafahanao mihodina ny bara, ampifanaraho amin'ny tohotrao ny kibonao mba hifanaraka amin'ny kodiarana eo alohany.
Ny fomba tsara hanaovana an'io dia ny mijoro eo ambonin'ny kodiarana eo aloha ary mitazona azy eo anelanelan'ny tongotrao ary hahazo izany tsipika fahitana mahafinaritra eo amin'ny fantsonao ambony kodiarana sy ny fotony ianao. Ary avy eo henjanio ilay visy. Tsy te-hanenjana loatra an'io ianao.
Izany hoe, tsy manana fihetsiketsehana ara-bakiteny ilay fitaovana, fa kosa afaka mivezivezy ny tohana. Raha vantany vao misy ny disadisa dia lasa lavitra loatra ianao ary mety hanimba ny bearings ary hangeja ny vodin-tsoriko. Milamina amin'ny toerany ny zava-drehetra, tsara isika, azo antoka ny kodiarana, azo antoka ny frein aloha.
Midika izany fa tsara isika amin'ny ankapobeny ary mitaingina ny làlambe. Ny zavatra farany tokony hataontsika dia ny manamboatra ny fork napetraka, ary tena ho hitantsika izany amin'ny andiany Essentials manaraka ao amin'ny GMBN Tech. Ka eo no alehanao, nifanakalo tapa-dàlana tamim-pahombiazana izahay, nanamboatra azy io ary nametaka azy io tamin'ny bisikileta niaraka tamina lahatsoratra vaovao ho anao, tena mahafinaritra ny manavao ary manatsara ny fikirakirana ny bisikiletanao raha mahazo eo ianao.
Raha te hanana lahatsoratra tsara hafa dia tsindrio eto raha mila lisitra ilaina izahay. Ka izay daholo ny zavatra ilaina amin'ny fototra, fa tena zava-dehibe ho an'ny tsirairay ny mahalala ny olan'ny fononteny, kitiho eto. Ity ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fikojakojana ary alao antoka fa tsy mikorontana izy io.
Tahaka ny mahazatra, kitiho ny tany boribory hisoratra anarana amin'ny GMBN Tech. Tianay ny manana anao eto ary manome antoka fa milaza amin'ny olona momba anay koa ianao! Raha mankafy hikarakara ny bisikiletanao ianao dia omeo ankihibe izahay!
Ahoana no fanovana ny forkety bisikileta eo aloha?
Atsaharo nyanoloanaTapitraesorynyanoloanavaky sy kodiarana. Vahao ny fehin-kiho amin'ny sisin'ny taho aryesoryny bolt ambony sy ny satrony. Tsoahy hiala ilayforkary solafaka nyforkavy amin'ny lohan-doha. Ho potika ny headset-nao; tazomy izy ary apetraho tsara.30 apr 2010
Ahoana no fanesoranao ny forkety bisikileta taloha?
Ahoana no manalanyKitapo bisikiletaary ny Stem
esoryny kodiarana eo anoloana avy amin'nyfork.
esoryny freins avy eo alohafork.
Vahao ny kofehy efatra hex izay mampifandray ny tsorakazo amin'ilay fotony.
Vahao ny kofehy hex izay miantoka ny satrony ambony loha.
Vahao ny fehikibo roa hex izay mametaka ny vodin-kazo amin'ny fantsona familiana.
Manomboka amin'ny fanavaozana ny bisikileta taloha miaraka amina headset sy fotony vaovao, ity Nishiki ity dia hahazo fanatsarana farany eo am-piandohana ka hatramin'ny tapaky ny taona 90, manomboka amin'ireo levers fitaovana simba-hafanana, kasety dodgy, ary mazava ho azy aloha ny loha sy ny fotony avy amin'ny tariby eto ny frein front dia avy eo ny tape sy ny freins any aoriana dia miambina ireo tariby tsy mitongilana fa tsy misy maharary kokoa noho ny dona amin'ny rantsan-tànana avy amin'ny iray amin'ireo tariby derailleur ireo izay manadio ny fomba hanesorana ny vodin-tsambo miaraka amin'ny ilantsika hafa. marina ny mihazona ny tànany sy ny manala ny vatan-kazo ary avy eo ny lohan-doha Mba hanesorana ny peratra satro-boninahitra, izay ataontsika amin'ny mpanintona peratra satro-boninahitra, dia mila manamafy ny visy amin'ny tsipika eo aloha ianao. Ny lelany dia eo ambanin'ny peratra ary esorinao ny satro-boninahitra, avy eo alefaho avy eo, esory ity fitaovana fanesorana cap ity, tsara ho an'ny valo amby roapolo teboka enina milimetatra, saingy tsy manana maodely efatra milimetatra efatra milimetatra izay ilaiko eto aho. Ka mandondona ny kaopy amin'ny visy biriky aho izay hampiasako ny fitaovana fanaovan-gazety notapahana hametahana ireo kaopy vaovao, mora ny fivorian'ny satroboninahitra, ny fitondra tombo-kase sy ny kaopy izay mametraka ny kaopy ambony indrindra, ny eo ambany kapoaka kapoaka amin'ny tongotra mipoitra ao ambanin'ny vatan-kazo toy ny menaka manamboatra ny tombo-kase, io dia tsara kokoa noho ny amin'ny headset teo aloha ary izao ho an'ny fotony tsara tarehy kokoa, raha hitanao fa mahasoa na mampiala voly ity lahatsoratra ity, kitiho ny bokotra mba hisoratra anarana ary mampandre rehefa lavo ny manaraka
Azonao atao ve ny mametraka ny fork Lefty amin'ny bisikileta rehetra?
Ankehitriny, Cannondale dia nanolotra nyAnkaviaho an'ny programa rehetra izay mampiasa reducers sy adaptatera avelaianareomihazakazaka aZana-kazo haviamahitsy 1.125 ″ na tapered 1.125 ″ -to-1.5 ″ headtube.7 Aogositra 2010
Azoko atao ve ny mametraka fork lehibe kokoa amin'ny bisikiletako?
Amin'ny ankapobeny,bisikileta nomanaiky am-pifalianafitrebikaizay hatramin'ny 20mm lehibe kokoa noho ny nokasain'ny mpamorona azy ireo. Aza misalasala mandeha mihoatra izany raha tsy maintsy atao, fa miomàna abisikiletafanympanamboatra tsy tena nikasa ny hamorona. Tsy midika izanydiaminono, fa zavatra tokony ho fantatra ihany.19 Jona. Oktobra 2018
Ahoana no ahafantarako izay fork hividy?
Raha manana kodiarana 27.5 / 650B na 29in ianao dia mila ny habeny mifanaraka aminyfork. Soso-kevitra: raha manana kodiarana 26in ianao dia afaka mampiasa habe 26infitrebika(mazava ho azy) fa azonao atao koamahazomiala amin'ny fihazakazahana 27.5 / 650Bforktsy manelingelina ny fikirakirana ny bisikiletanao.5 Aogositra 2014
Ahoana no fanesoranao ny kofehin'ny forkety?
Mihazona ambanykofehyhazakazaka amin'ny spanner. Mamaha aryesorylocknut ambony amin'ny alàlan'ny fihodinana mifanohitra amin'ny famantaranandro.esorykodiarana eo aloha raha mbola eo amin'ny toerany.esorymisy mpanasa lamba / spacera avy eo amin'ny tsiranoka.24 Aogositra 2015
Tsara ve ny forkitra Lefty?
Izy ireo vetsara? Mazava ho azy. Cannondale dia manana laza malaza ho iray amin'ireo marika manavao indrindra amin'ny bisikileta ary tsy natahotra mihitsy izy handika ny 'fitsipi-dalao' amin'ny famolavolana bisikileta nentim-paharazana amin'ny fitadiavana fampisehoana. Rehefa avy nandany volana vitsivitsy tamin'ny Cannondale farany teoAnkaviaOcho, lasa mpankafy aho.5 mart 2021
Inona no ilana ny fork avia?
Satro-boninahitra tokana sy tokana eto an-tany, fampiatoana amin'ny lafiny irayfork.AnkaviaOcho dia malama sy henjana noho ny hazakazaka XC ultralight hafaforkeny an-tsena. Midika izany fa fanaraha-maso bebe kokoa, fahamendrehana bebe kokoa, ary maro hafaPointary mitifitra, fahatokisan-tena amin'ny freins, ho an'ny hafainganam-pandeha bebe kokoa, amin'ny toerana maro kokoa, matetika kokoa.
Ahoana no fanovanao ny fork amin'ny bisikileta an-tendrombohitra?
Amin'ny alàlan'ny fitaovana mety, na fanampiana avy amin'ny fivarotanao, azonao atao ny manatsara ny fampiatoana ny bisikileta an-tendrombohitra na ny fitsaboana ny masinina misy anao amin'ny tadin'ny karibonitra. 1. Esory ny faran'ny aloha esory ny vaky aloha sy ny kodia. Vahao ny fehin-kiho amin'ny sisin'ny fotony ary esory ny bolt sy ny satrony ambony.
Azo soloina fork fampiatoana ve ny fork henjana?
Azoko atao ve ny manolo ny fork henjana amin'ny fork fampiatoana amin'ny bisikileta Mongoose Alder. 27.5. Raha izany dia inona ny fork manokana? Latsaky ny $ 100.00 ara-teknika eny. Mila mila fork ianao miaraka amin'ny steerer straight (toa ny fenany 1 1/8 ') izay lava loatra ho an'ny frame, angamba ny fetezana 9mm QR (na dia kodiarana mafy aza ny kodiarana fa tsy QR).
Inona no tokony hataoko raha latsaka ny bisikileta?
Esory ny kitapom-batana amin'ny fotony. Apetraho eo amin'ny sisiny ny bisikileta na avadika amin'ny toeran'ny bisikileta (satria raha mitsangana mijoro amin'ny toerany ny bisikileta, ary esorinao ilay fotony, dia hianjera amin'ny tany ilay fork). Hamarino tsara fa misy latabatra na ravina tsara eo amin'ny faritra etsy ambany iasanao, ka raha misy faritra mihintsana dia ho mora hita izy ireo.